Raiisul wasaare Abiy Axmed oo booqanaya dalal ka tirsan Yurub – AwKutub News
Geeska Africa Wararka
Raiisul wasaare Abiy Axmed oo booqanaya dalal ka tirsan Yurub
By awkutubnews October 29, 2018
Leave a Comment on Raiisul wasaare Abiy Axmed oo booqanaya dalal ka tirsan Yurub
Raiisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya ayaa saakay u ambabaxay dalka Faransiiska, safarkiisan ayaana qeyb ka ah booqashada uu ku marayo dalal kamid ah qaaradda Yurub.
Inta uu Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ku sugan yahay Paris waxaa uu la kulmi doonaa Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron.
Kadib marka ay soo dhamaato booqashada Raiisul wasaaruhu uu ku joogo Faransiiska waxa uu usii gudbi doonaa dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmi raiisul wasaaraha dalka Jarmalka Angel Merkel iyaga oo ka wada hadli doonaan arrimaha ka dhexeeya labada dal.
Sidoo kale raiisul wasaare Abiy Axmed ayaa dalka Jarmalka kula kulmi doona 25,000 oo Itoobiyaan ah kuwaa oo ka kala yimid dalal kala duwan oo ku yaalla qaanadda Yurub.
Booqashada ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa loogu magac daray “Aan u istaagno sidii wadajir ugu dhisi laheyn mustaqbalkeenna” raiisul wasaaraha ayaana casuumaad rasmi ah ka helay madaxda labadaas dal.
Tags: France Geeska Afrika Itoobiya Midawga Yurub Wararka
Previous Entry Jigjiga : Xildhibaano ka tirsan DDS oo sabab la yaab ah loo xiray
Next Entry Golaha wasiirrada Dawladda Federaalka oo ansixiyey miisaaniyadda 2019